श्रीमती रिसाएर हैरान तनावमा हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यसो गर्नुहोस् Kasthamandap Daily
काठमाडौं । मानिस रिसाएको बेला के सही के गलत सोच्दैन । उ खाली आफ्नो रिस देखाउनमात्र तत्पर रहन्छ । यस अवस्थामा भएका घटनाले पछिसम्म नराम्रो परिणाम दिने गर्छ । अझ यसको असर वैवाहिक जीवनमा धेरै नै हुन्छ । श्रीमान र श्रीमतीबीच वैचारिक मतभेद हुनु सामान्य कुरा हो । केही कुरामा मतभेदका कारण झगडा हुनु पनि सामान्य नै मानिन्छ । तर, उक्त रिसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ठुलो दुर्घटना समेत निम्तिने गर्छ ।
अधिंकाश पुरुषहरुको एउटै समस्या भएको देखिन्छ कि उनीहरुको श्रीमतीलाई रिस धेरै उठ्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई मनाउन निकै गाह्रो पर्छ । कतिपय अवस्थामा त महिलाहरु निकै सेन्सेटिभ समेत भइदिन्छन् जसका कारण पुरुषहरुलाई समस्यासँग झेल्न निकै गाह्रो पर्छ । एउटा कुरा सदैव ध्यानमा राख्नुपर्छ, रिसाएको मानिससँग जहिले पनि शान्त व्यवहार गर्नुपर्छ । तर, रिसको स्वभाव भएका मानिसहरु यस्ता कुरालाई वास्ता गर्न चाहँदैनन् । दुवै जनाले रिसाहा स्वभाव देखाएमा अवस्था झन् खतरनाक बन्नेगर्छ ।
१. शान्तिसँग गरिएका हरेक काम सफल हुन्छन् । यदि तपाईकी श्रीमती रिसाएकी छिन् वा रिसाउने बानी छ भने सबैभन्दा पहिला आफू शान्त रहनुहोस् । तपाई पनि रिसाउनु भयो भने समस्या झन् जटिल बन्छ । यसकारण शान्त र संयम रहनुहोस् ।
५. यदी तपाईको बच्चाहरु छन् भने उनीहरुसँग पनि उपाय लिनसक्नु हुन्छ । प्राय बच्चाहरुसँग महिला नजिक हुने गर्छन् । उनीहरुलाई पनि महिलाहरुको समस्याबारे थाहा हुन्छ । यसले पनि ठुलो मदत दिने काम गर्छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा